In da'da hadda ee horumarka tiknoolijiyada, badalista qalabka si ay u helaan ugu soo baxay oo ka mid ah qaababka cusub oo xiiso leh waxa uu noqday isbedel ah halkii ay wax caadi ah. Dadku waxay noqon casriga ah ka sii miyir qabo oo ay tahay qof walba ayaa walaac Ra'iisul in qalab ah in qalabeysan yahay kaliya qalabka aad ugu dambeeyay farsamo leedahay.
Beddelashada Device la dhehay karaa laakiin ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala ay doonayaan in ay sii xogta ka qalabka hore ay ammaan. Tani waa habka kaliya ee lagu caajiso iyo xoogaa eheeyn ku lug xidhiidh qalab. Haddii aad raadinayso in ay xogta ka Nokia ah wareejiyo qalab Blackberry, maqaalkan aad hanuuniyo sidii ay u. Waxaa qoreysa laba hab oo lacag la'aan ah in ay beddelaan macluumaadka ka Nokia fiican in Blackberry oo ka hadlayaa faa'iidada iyo khasaaraha ee kasta.
Ka Nokia beddelashada Data in BlackBerry Gacanta
Si aad u gudbiyaan xogta aad gacanta ka Nokia ah in Blackberry ah, aad 'u baahan doontaa:
2 USB fiilooyinka
Laptop A ama computer
Si ay u gudbiyaan Pictures, Music iyo Videos
1. Isticmaalka fiilooyinka USB ah, xirmaan telefoonka Nokia iyo telefoonka aad BlackBerry in computer ama laptop.
2. Laga Explorer File, aad u hesho telefoonka Nokia iyo double click ku yaal si aad u eegto waxyaabaha ku jira.
3. Meel folder la odhan jiray "Sawiro" iyo double click si aad u eegto jira.
4. Press Ctrl + a in ay doortaan oo dhan sawirada ku gal ama ay doortaan sawiro shakhsi adigoo gujinaya iyaga on iyadoo ay hoos u muftaaxa Shift ah.
5. Marka aad samayn doorashada, xaq guji oo ka menu in kor u furmay dooro "Copy" ama haddii kale riixi Ctrl + c.
6. Hadda isticmaalaya File Baadh, helo telefoonka aad BlackBerry iyo furi ku jira. Meel ku galka ku tilmaamay "Sawiro" ama haddii ay jirto ma aha mid mar hore, mid ka dhigin. Si aad u samayso gal cusub oo xaq u riix oo ka menu in furay aynu tagno Ilmaha hadda> Folder.
7. Magaca Folder sida sawirada, fur adigoo double magcaabo ku yaal kadibna riix Ctrl + v in paste oo dhan sawirada Caadil ah oo idinka soo guuriyeen ka phone jir Nokia.
8. Isticmaalka nidaamka isku mid kuu soo gudbin karaa muusig iyo cajallado fiidyow ka Nokia in BlackBerry.
Si ay u gudbiyaan Xiriir
Haddii qalabka Nokia ayaa account Google a qaybiyay u ah oo aad horey u dhan xiriirada aad synced in account Google in ka badan kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso mid ka mid ah wax ka badan. Si fudud u gasho in qalab BlackBerry adiga oo isticmaalaya xisaab ay isku Google, iyo xiriirada oo dhan la synced doonaan in qalab BlackBerry aad.
Dhammaan xiriirada aad waxaa loo wareejin doonaa qalab BlackBerry iyo lagu soo bandhigi doonaa waxa ku jira.
Faa'iido: fudud, waxay u baahan tahay oo kaliya aqoonta aasaasiga ah ee koobi wax dhajinta /
Qasaarooyinka: jirto si ay u gudbiyaan cadaymaha ama jadwal, wax kasta oo ay leedahay in la si gaar ah guuriyeen
Ka Nokia beddelashada Data in BlackBerry via kaabta
Marka la samaynayo dariiqadan, uma baahnid in aad si shaqsi ahaan aad nuqulka xogta Jinka /. Waxay u baahan tahay in aad raad raac hore aad telefoonka Nokia oo markaas la isticmaalayo gurmad in, celin telefoonka aad BlackBerry. Sidaas nidaamka guud wuxuu leeyahay laba talaabo:
Backing ilaa Device Nokia ah
Soo celinta qalabka BlackBerry isticmaalaya gurmad in
Bal aynu eegno labada tallaabo mid mid:
Si aad dib ilaa aad telefoon Nokia, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Nokia PC Suite si aad u computer. Nokia PC Suite waa software ah oo lacag la'aan ah oo ay bixiso laftiisa oo lagala soo bixi karaa Nokia http://www.microsoft.com/en-pk/mobile/support/product/nokia-pc-suite/ . Marka aad soo bixi oo lagu rakibay Nokia PC Suite si aad u computer, raac tallaabooyinkan:
1. Daahfurka Nokia PC Suite iyo xirmaan telefoonka Nokia in laptop ama computer via cable USB ah. Dooro icon ee geeska sare ee midigta ah menu (wareejiyey iyadoo casaan).
2. Nokia content copier lagu daahfuri doonaa oo waxaa lagu weydiin doonaa in aad dooratid telefoonka in aad rabtid in aad gurmad. Dooro ikhtiyaarka oranaya "kaabta ka kooban phone jeclaaday inuu file gurmad ah oo la badbaadiyey on PC ah".
3. screen A muuqan doonaa weydiinaya in aad dooratid alaabta xogta in aad rabtid in aad gurmad. Hubi ama uncheck waxyaabaha sida aad looga baahan yahay oo guji arrow weeraryahanka hoose ee shaashadda.
4. Nidaamka gurmad ayaa wax yar isagoo doonaa bar horumarka ah taas oo loo isticmaali karaa si ay ula socdaan horumarka geeddi-socodka. Sug nidaamka si ay u buuxiyaan iyo in la hubiyo in telefoonka ma fuqi halka habka weli socda.
Si aad u soo celin xogta laga file gurmad in aad abuuray oo keliya, waxaad u baahan doontaa software BlackBerry Desktop. Waa barnaamij utility BlackBerry rasmi ah oo waa bilaa lacag laga heli karaa http://us.blackberry.com/software/desktop . Download iyo gashato BlackBerry Desktop in aad laptop ama computer soco sida hoos ku faray:
1. Isku qalab BlackBerry aad si aad laptop ama computer iyo abuurtaan software BlackBerry Desktop. Tag Device Soo Celinta.
2. Laga screen in furay ilaa, ay helaan faylka raad raac ah oo aad telefoonka Nokia ka dibna dooro xog ah in aad rabto in aad soo celin adigoo ama unchecking waxyaabaha xogta la doonayo. Guji "Soo Celinta" marka aad dhamaysid.
3. Marka geeddi-socodka dib u soo celinta dhamaato, waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka aad ka heli karaa Nokia in qalab BlackBerry aad.
> Resource > Free > Free Siyaabaha Demi Xogta laga Nokia in BlackBerry